Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): June 2013
ကမ္ဘာမြေကို သွေးအများဆုံး စွန်းစေခဲ့သူ- မွန်ဂို ဧကရာဇ်- ဂျင်ဂစ်ခန် နှင့် နက္ခတ် ပညာ..(၂)
ဂျင်ဂစ်ခန် ဆိုသော သူတစ်ယောက် အကြောင်း..။
ဗြိတိသျှတို့၏ နေမ၀င် အင်ပိုင်ယာထက် ကျယ်ပြန့်သော မြေပြင်ကို စိုးမိုး သွားသူ တစ်ဦးကို- “တိုက်တိုင်းအောင် စစ်သူကြီး” ဟု စာဖတ်သူ ထင်နေလျှင် မှားသွားပါလိမ့်မည်။
ငယ်စဉ်က သွေးသောက် ညီအကို ဖြစ်ရာမှာ- အာဏာယှဉ်ပြိုင်မှု Power Struggle ပွဲတွင် ရန်သူ ဖြစ်သွားကြရသော ဂျမူလ်ကာ နှင့် တိုက်ခဲ့ရာ တွင်လည်း ရှုံးခဲ့ဘူး၏။
အင်အား သိပ်မရှိသေးခင် အနေအထား- ကနဦး တိုက်ပွဲတွင်- ရန်ငြိုး ရန်ဘက် ဖြစ်သူ မာကစ် တို့ နှင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ရာတွင်လည်း အင်အား ၁၀-ဆ မက- ကွာလွန်းသောကြောင့်- ရှုံးဘူး၏။
ရှုံးနိမ့်၍ သူ၏ တပ်များကို ဆုတ်ခွာစေသော အခါ- အခြားသော မွန်ဂို လူမျိုးစုများ ရှုံးလျှင်- လက်ထဲမှ လက်နက်တို့ကို ပစ်ချလျှက် အသက် အတွက် ခွေးပြေး ၀က်ပြေး ပြေးကြသော ထိုခေတ် အခါတွင်- သူ၏ တပ်ဖွဲ့များမှာ အလွန် စနစ်ကျစွာ ဆုတ်သွားကြခြင်း ဖြစ်လေရာ- မားကစ် ခေါင်ဆောင် အနေဖြင့်- “ဘယ်သူမှ ဆက်မလိုက်ကြနဲ့- သူတို့ ဆုတ်သွားတာ- တပ်အနေနဲ့ ထွက်ပြေးတာ မဟုတ်ပဲ- လူတစ်ယောက် ထဲ နောက်ဆုတ် သွားသလို တစ်စု တစ်လုံးတည်း ရှိနေလေတော့- ငါ့မှာ ဒီထက် လူ ၂-ဆ ပိုရှိလည်း ငါဆက်လိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ရှုံးတာတောင် ဒီလောက် စနစ်ကျနေယင်- သူတို့က တိုက်ခိုက်ယင်- ဒီထက် ၂-ဆ ပြင်းထန် လိမ့်မည်” ဟု ဆိုခဲ့ရ၏။
ဤသည်ကား စည်းကမ်းကို ဖေါ်ဆောင်တတ်သည့် ဂျင်ဂစ်ခန် ဖြစ်၏။
သူသည် စာမဖတ်တတ်၊ စာမရေးတတ်ခဲ့။ သို့သော်- သူသည် အတွေး အခေါ် ညံ့သူ တစ်ဦးမဟုတ်ချေ။ အများတကာထက် သာလွန်သော စစ်ဗျူဟာ အမြင်ရှိသူ၊ စစ်သားများကို မည်သို့ ထိမ်းသိမ်း ရမည်ကို သိသူ ဖြစ်၏။
သူ၏ စည်းကမ်းတို့ကို ဥပဒေ အဖြစ် ထုတ်ခဲ့သော- ယက်ဆာ ဥပဒေတွင်- ရိုးရှင်းသော်လည်း အဓိပ္ပါယ် များစွာ လေးနက်သော အချက်များစွာ ပါ၏။ သူ၏ ဥပဒေ မှ သူ၏ အမြင်ကို သိမြင်နိုင်၏။
တစ်ဦးကို တစ်ဦး ချစ်ခင်ပါ။ (စစ်တိုက်ခြင်း သည်- တကဏ္ဍ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မုန်းတီး မှု ကို တကဏ္ဍ၊ ခွဲခြားခြင်း ဖြစ်သည်။)
မည်သည့် လူမျိုးမှ မဆို- ပညာရှိသူကို လေးစားပါ။
သက်သေ လိမ်လည် ထွက်ဆိုခြင်း မပြုရ။
ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိဖြင့် လိမ်လည်သူ၊ မှော်စုံး အတတ် လေ့ကျင့်သူ၊ ဒလျှို ဒလန် လုပ်သူ၊ တစ်ပါးသူများ ပဋိပက္ခ ခိုက်ရန် ဖြစ်ချိန်တွင်- တစ်ဘက်မှ ၀င်၍ စွက်ဘက်သူ တို့အား- သေဒဏ် စီရင်မည်။
ညီအကို အချင်း သစ္စာ မဖေါက်ရ။ မဖြစ်နိုင်သော ကတိ မပေးရ။
သူတစ်ပါး သားမယား နှင့် မဖေါက်ပြန်ရ။
ဖြောင့်မတ်သူကို ချီးမွမ်း၍- အပြစ်မဲ့သူကို ကာကွယ်ပေးရမည်။
စား၍ ရသော အစာ မှန်သမျှကို မျှဝေ ရမည်။ မိမိ အစားကို သူများ အား ခွဲပေးရမည် စိုး၍ ဦးစား စားသောက်ခြင်း မပြုရ။ သူများတကာ လှူဒါန်း ထားသော အစာကို လှူသူက ပြန်စွန့် မစားသေး မချင်း ဘယ်တော့မှ မစားရ။
အားလုံးသော အဖွဲ့အစည်းတို့ကို တစ်ဖွဲ့တည်း အနေဖြင့် သဘောထားရမည်။ ဘုရားသခင် နှင့် ပတ်သက်သူသည်- ခန်တို့၏ ဥပဒေ ကို လိုက်နာ သရွေ့ ထိုသူအား အနှောက်အယှက် မပြုရ။
မွန်ဂို နန်းဆက်တို့ကို ကွပ်မျက်ရာတွင် သွေးမထွက်စေရ။ ၄င်းတို့အား- ကော်ဇောဖြင့် ပတ်ပြီးမှ- ရိုက်နှက်၊ ထုသတ်ခြင်းဖြင့်သာ ကွပ်မျက်ရမည်။ (မှတ်ချက်- သွေးသောက် ညီအကိုဟောင်း ဖြစ်သူ ဂျမူလ်ခါ သည်- ၄င်းအား ထိုသို့ ကွပ်မျက်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။)
လုပ်ငန်းရှုံး ဒေ၀ါလီ ခံရသူသည်- ၃-ကြိမ် မြောက် ဖြစ်ပါက- သေဒဏ် စီရင်ရမည်။
စီးဆင်းနေသော ရေတွင်လည်းကောင်း၊ မွန်ဂို အိမ်တွင်းတွင် လည်းကောင်း ရေချိုးခြင်း၊ အပေါ့စွန့်ခြင်း မပြုရ။
စမ်းချောင်း၊ မီးပုံ၊ ပြာပုံ တို့တွင် ဓါး၊ လှံ မထဲ့ရ၊ ၄င်းတို့တွင် အပေါ့မစွန့်ရ။ (မှတ်ချက်- မွန်ဂိုတို့သည် ရေ၊မြေ၊လေ၊မီး ဓါတ်ကြီးများကို ကိုးကွယ် ယုံကြည် ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုဥပဒေ ကို ပြဋ္ဌာန်းခြင်း ဖြစ်သည်။)
စသော စည်းကမ်းများ ရှိသကဲ့သို့။
မည်သည့် မွန်ဂို တစ်ဦးတစ်ယောက် အနေဖြင့်- မိမိ၏ အရှင်သခင်ကို ရန်သူလက်သို့ မည်သည့် အကြောင်းနှင့်မျှ ဖမ်းဆီး အပ်နှံခြင်း မပြုရ။ (ဂျမူလ်ကာ နှင့် နောက်ဆုံး တိုက်ပွဲတွင်- ဂျမူလ်ကာ ၏ စစ်ဗိုလ်များသည်- သူတို့၏ သခင်အား လေးစားမှု မရှိတော့သောကြောင့်- ဂျင်ဂစ်ခန် ဘက်သို့ ပြောင်းရာတွင်- ဂျင်ဂစ်ခန် မှ ၄င်းတို့ကို မျက်နှာပေးစေရန်- သခင် ဖြစ်သူ ဂျမူလ်ကာ ကို ဖမ်းပြီး ဂျင်ဂစ်ခန် အား ဆက်သ ခဲ့သည်။ သို့သော်- ဂျင်ဂစ်ခန် ဆီမှ ရရှိသော ဆုလာဘ်မှာမူ- မိမိသခင်ကို သစ္စာဖေါက်သော ထိုစစ်ဗိုလ်တို့အား ခေါင်းဖြတ် စေခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်တော့သည်။ ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်တွင်- ဂျမူလ်ကာ မဟုတ်ပဲ- အခြားသူ အနေဖြင့် ရိုက်ကူးပြထားသည်။)
သက်ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ “ခန်” တို့အနေဖြင့်- မိမိတို့၏ ရဲဘော်များကို တိုက်ပွဲတွင် ဒဏ်ရာဖြင့် ထားပစ်ခဲ့ခြင်း မပြုရ။ ဖေါက်ဖျက်ပါက သေဒဏ် ဖြစ်သည်။
တိုက်ပွဲ အောင်မြင်မှု တို့မှ ဆုအဖြစ် ခွဲတမ်း ချသည်များကို အညီအမျှ ခွဲဝေပေးရမည်။ ရဲမက် တို့ ဒဏ်ရာကြောင့် ကိုယ်တိုင် လာရောက် မယူနိုင်ပါက- အကြီးအကဲ “ခန်” ကိုယ်တိုင် သွားရောက် ပေးရမည်။ (ဂျင်ဂစ်ခန် ကိုယ်တိုင် ဤသို့ ကျင့်ကြံခဲ့သော ကြောင့် သာမာန် မွန်ဂိုလူမျိုးစု လေး၏ ခေါင်းဆောင်မှ- ရဲမက်တို့၏ ချစ်ခင်မှု လေးစားမှုကို ရပြီး - စစ်ဧကရာဇ် ဖြစ်ခဲ့ရခြင်းလည်း ဖြစ်၏။)
ဖခင် သေဆုံးသွားပါက- သားကြီး အနေဖြင့်- မိခင်ကို စောင့်ရှောက်ပြီး- ဖခင်၏ အခြား မိန်းမများကို - ဇနီးမယား အဖြစ် လက်ထပ်ယူရမည်။ ထိုမိန်းမ တို့၏ သားသမီးများကို- မိမိ၏ သားသမီးများ အဖြစ် စောင့်ရှောက်ရမည်။ (ရာသီဥတု ကြမ်းတမ်းသော၊ အစာရေစာ မလွယ်ကူသော ဒေသတွင် ယောက်ျား၏ စောင့်ရှောက်မှုကို မခံရသော မိန်းမတို့ အနေဖြင့် လွန်စွာ အတိဒုက္ခ ရောက်မည် ဖြစ်သောကြောင့်- တာဝန်ယူတတ်မှု နှင့် ယှဉ်တွဲကာ ပြဋ္ဌာန်းသော ဥပဒေ ဖြစ်၏။)
အချုပ်ဆိုရသော်- ဂျင်ဂစ်ခန် ၏ ၀ါဒမှာ- တာဝန်ယူမှု၊ သစ္စာရှိမှု နှင့်- တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို ပေးခဲ့တာ ပြန်ပေးပါ ဟုပင် ဖြစ်သည်။
သူ့နှင့် သူမိသားစုဝင်များကို ရက်စက်ခဲ့သူများ- အား မပျက်မကွက် ပြန်လည် ရက်စက်ခြင်းသည် သူ၏ သွေးတာဝန် ပင် ဖြစ်တော့၏။
များစွာသော သူတို့ အနေဖြင့် ဂျင်ဂစ်ခန် သည် လွန်စွာ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်သူ ဖြစ်ကြောင်း နားလည်ထားသော်လည်း- သူ၏ ကောင်းမြတ် သော ထင်ရှားသည့် အရည်အချင်းများ အနက်မှာ အချို့မှာမူ-
သူသည် နပိုလီယန် ကဲ့သို့ပင်- မိမိ၏ ချစ်သူ အပေါ်တွင် လွန်စွာမြတ်နိုး တန်ဘိုး ထားစွာ ချစ်တတ်သူ ဖြစ်သည်။ သူသည် မိန်းမများစွာ ရှိသော်လည်း- မိမိ၏ ဇနီးမယားကို တန်ဘိုးထား စောင့်ရှောက်သော လင်ယောက်ျားကောင်း တစ်ဦးလည်း ဖြစ်၏။ ဇနီးဖြစ်သူအား ရန်သူများက ဖမ်းဆီးသွားပြီး - နောင်အတန်ကြာမှ- ကယ်တင်နိုင်ပြီး- မကြာခင် သူမတွင် ကိုယ်ဝန် ရှိသော်လည်း- ဂျင်ဂစ်ခန် သည် ထိုဇနီးအား- မြတ်နိုး တန်ဘိုး ထားသည်သာမက- ထိုသားအားလည်း သူ၏ သားအဖြစ်ပင် သတ်မှတ်သည်။
သူသည် စစ်သား တစ်ဦးမျှသာ မဟုတ်- နိုင်ငံရေး အမြင်လည်း ရှိသူ ဖြစ်ကြောင်းကို- အောက်ပါ အချက်တို့ အရ- မြင်တွေ့နိုင်သည်။
သူသည်- လက်အောက် ငယ်သားများအား - ရက်ရောစွာ ပေးကမ်း စောင့်ရှောက်သူ ဖြစ်သည်။
သစ္စာကတိ ကို တန်ဘိုးထားသူ ဖြစ်၏။ သစ္စာမဲ့သူများကို လွန်စွာ ရွံ့မုန်း၏။
သူ့တွင်- အင်မတန် မြန်ဆန် တိကျ စွာ လူကဲခတ် နိုင်စွမ်း ရှိသူ ဖြစ်သည်။
သူသည်- သူ၏ မွန်ဂိုတပ်များကို စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းပြီး- စစ်စွမ်းရည် မြင့်တက်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်သူ ဖြစ်သည်။
Meritocracy ခေါ် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်ကို ဦးစားပေးသူ ဖြစ်သည်။
မိမိ၏ မွန်ဂို ရဲမက်များကို တိုက်ပွဲတွင် ဒဏ်ရာဖြင့် စွန့်ပစ်ထားခဲ့သော အရာရှိ ခေါင်းဆောင်များကို သေဒဏ် စီရင်သည်။
စစ်ဗျူဟာများကို လိုအပ်သလို- အမြဲ ပြုပြင် ပြင်ဆင်သည်။ အများထင်ထားသကဲ့သို့- ဧကရာဇ် တစ်ပါး အနေဖြင့်- အမိန့်ပေး စေခိုင်း ရုံ သက်သက်မျှ မဟုတ်ပဲ- တပ်မှူး၊ စစ်ကဲများ၏ အမြင်များကို သေချာစွာ နားထောင်ပြီး- နောက် တာဝန်ပေး စေခိုင်းခြင်း ဖြင့်- မိမိ၏ ရည်ရွယ်ချက် ကို အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်သည်။
သူသည် မည်သူနှင့် မဟာမိတ် လုပ်ထားသင့်သည်ကို သိခဲ့ပြီး- ထိုသူ့အား မိမိ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အကောင်းဆုံးကို ရက်ရောစွာ ပေးနိုင်သူလည်း ဖြစ်သည်။
ရာဇ ယောဂ တို့နှင့် ဂျင်ဂစ်ခန်
ဂျင်ဂစ်ခန်၏ ဇာတာတွင် ရာဇ ယောဂ မြောက်များစွာ ပါဝင်နေ၏။ သို့သော်- ရာဇ ယောဂ နှင့် ပါတ်သက်၍- နက္ခတ္ထ ဝေဒ ပညာရှင်၊ ၀ါသနာရှင် များ အနေဖြင့်- ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် သိရန် လိုအပ်သော အချက်များစွာလည်း ရှိနေလေ၏။
အချို့က- ရာဇ ယောဂ ပါလျှင်- အမျိုးသား ဆိုယင် မင်းဖြစ်မည်။ အမျိုးသမီး ဆိုလျှင် မိဘုရား ဘုရင်မ ကဲ့သို့ ဖြစ်မည် ဟု ဆိုတတ်ကြ၏။ ရာဇ ယောဂ နှင့် ရာဇ ယောဂ ကဲ့သို့သော ယောဂများသည် ဇာတာရှင်၏ ဘုန်းတန်ခိုး ကြီးမားနိုင်မှု၊ ဘ၀ အောင်မြင် ကြီးပွား နိုင်မှုတို့ကို ဖေါ်ပြသော ရှေးကျမ်း အလာ ယောဂ ခေါ် ယုဂ်များ ဖြစ်ကြသည်။
အမှန်အားဖြင့် ရာဇ ယောဂ ဆိုသည်မှာ- အများအား ဦးဆောင်နိုင်သော အစွမ်းရှိသည့် ယောဂ (၀ါ) planetary situations နှင့် Planetary Combination တို့ ဖြစ်ပြီး- ရာဇ ယောဂ ပုံစံ အမျိုးမျိုး ရှိနေလေရာ- လူတိုင်း တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုတော့ ရနေတတ်၏။ မြင်အောင် ကြည့်တတ်ဘို့သာ လိုအပ်ပါ၏။
အဓိက အချက်မှာ- ရာဇ ယောဂ ကို ရှာတွေ့ပြီးနောက် ထိုရာဇ ယောဂ အနေဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိ မရှိကို လေ့လာရမည် ဖြစ်၏။
ထို ယောဂများ ကောင်းစွာ အလုပ် လုပ်နိုင်မှု တို့သည် ဂြိုဟ်နှင့် ဘာဝ တို့၏ အင်အားများ၊ ဇာတာခွင် တည်ဆောက် ဖွဲ့စည်းပုံ ဆိုင်ရာ အနေအထားများ တို့အပေါ်တွင်ပါ ဆက်စပ် မူတည် နေသည်ကို သတိပြု စေလို ပါသည်။ ဆရာသခင် ၀ါဟရ မိဟိရ အနေဖြင့် ညွှန်ပြ ခဲ့သည်မှာ-
"ရာဇ ယောဂ ပင် ရသော်လည်း- သက်ဆိုင်ရာ ဂြိုဟ်တို့ အင်အား နည်းသော ရာဇ ယောဂ သည်- လေထဲတွင် တိုက်အိမ် ဆောက်သော- စိတ်ကူးဖြင့်သာ ကြီးပွား ဦးဆောင် နေတတ်သော ရာဇ ယောဂပင် ဖြစ်လိမ့်မည်" ဟု ဖြစ်သည်။
ထိုရာဇ ယောဂ ကို ဖြစ်စေသော ဂြိုဟ်တို့သည်- ဒုဌာန ဘာဝ များ ဖြစ်သော ၆-တန့်၊ ၈-တန့် နှင့်၊ ၁၂-တန့်တို့တွင် တည်နေခြင်းဖြင့်- ရာဇ ယောဂ ပျက်ယွင်းသည် ဟု ဆရာသခင် က ညွှန်ပြ ခဲ့ပါ၏။ ထပ်ဆင့်၍လည်း လဂ် အားနည်းလျှင် လည်းကောင်း၊ ဂြိုဟ်တို့အား အဖျက် ဂြိုဟ်တို့က လွှမ်းမိုး ဖျက်ဆီး လိုက်သည်ကို လည်းကောင်း- ရှိနေပါက- ရာဇ ယောဂ အင်အား ပျက်စီးသွားတော့၏။
ဤသည်ကို ရာဇ ဘင်္ဂ ယောဂ ဟု ခေါ်ပါ၏။
နိစ္စဘင်္ဂ ရာဇ ယောဂ ကို- အများစု ကြားဘူး သော်လည်း- ရာဇ ဘင်္ဂ ယောဂ ကိုမူ သိပ်သတိ မပြုပဲ- ရာဇ ယောဂ ရလျှင်ပင် ကျေနပ် ပျော်ပိုက် သွားတတ် ကြပါ၏။ မည်သူကမျှ ကိုယ်ပိုင် ရရှိထား သည်ကို အဆိုးပြော ခံရမည်ကို မကြိုက်သော လူ့ စိတ်ပင် ဖြစ်တော့၏။
ရှေးကျမ်း စနစ်အတိုင်း လေ့လာပါကလည်း- ရာဇ ယောဂ တွေ့ရုံမျှ နှင့် ဇာတာရှင် ကြီးပွားပြီ၊ အထွတ်အထိပ် ရောက်ပြီဟု ဟောရန် မဟုတ်သေး၊ ထိုရာဇ ယောဂ များကို ဖျက်ဆီးတတ်သော အရိဋ္ဌ ယောဂ များ ပါရှိ မရှိ၊ အကယ်၍ ပါရှိလျှင် ထိုအရိဋ္ဌ ယောဂ များ၏ အဖျက်စွမ်းကို ချေဖျက် နိုင်သည့် ယောဂများ ပါ-မပါ ကိုပါ ဆက်လက် လေ့လာရမည် ဖြစ်၏။
ကြီးပွား အောင်မြင်မှု နှင့် ပတ်သက်သော- ကံကောင်း ထောက်မမှု၊ ဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ စည်းစိမ် - အထူးသဖြင့် အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်း နှင့် ၄င်းတို့သည် မိဘ ထံမှ အလွယ်တကူ ဆက်ခံ ရမည်လား- မိမိ ကိုယ်တိုင် အားစိုက် လုပ်ဆောင် ခြင်းဖြင့် ပိုင်ဆိုင်ရမည် လား ဆိုသည်တို့ကို ရာဇ ယောဂ - ရလာသည့် ပုံစံ အမျိုးမျိူးကလည်း ဖေါ်ပြနေ၏။
ရာဇ ယောဂ အား အလွယ်ပြောရသော်- ကိန်းအိမ်များ နှင့် တြိကုန်း အိမ်များ ဆက်သွယ်နေမှု နှင့် အဓိက ဆက်စပ် နေတတ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး- ၉-တန့်၊ ၁၀-တန့်၊ ၂-တန့်၊ ၁၁-တန့် နှင့် လဂ် (သို့မဟုတ်) စန်း တို့ ဆက်စပ် နေမှု တို့ပင် ဖြစ်သည်။ မြန်မာ နက္ခတ်ရှင် များစွာတို့က- ကိန်းအိမ်ရော၊ တြိဂေါဏ အိမ် အတွက်ပါ- အိမ်ရှင် ဖြစ်နေသော ဂြိုဟ်တို့ကို ယောဂ ကာရက ဟူ၍ သတ်မှတ် ကာ အထူးပြု လေ့လာတတ်ပါ၏။
ရာဇ ယောဂ များကို လေ့လာရာတွင်-
ဂြိုဟ်တို့ တည်နေရာ အလိုက်- planetary situations (သို့မဟုတ်) Planetary Placement အရ- ရရှိသော ရာဇ ယောဂများ-
ဂြိုဟ်တို့ အချင်းချင်း အပူးအမြင် လွှမ်းမိုးမှု တို့ကြောင့်- ဖြစ်ပေါ် ရရှိသော ရာဇ ယောဂ များ၊
ဂြိုဟ်တို့ အချင်းချင်း အိမ်ဖလှယ်ခြင်း၊ သမ္ဗန္ဓ ပြုကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရာဇ ယောဂများ။
အခြားခြားသော ရာဇ ယောဂ မျိုးခွဲများ- ဟု၍ ရှိရာတွင်-
မိန်လဂ် ပိုင်ရှင် ဆိုပါအံ့- ကြာသပတေးသည် ၄င်းပိုင်ရာ မိန်လဂ် တွင်- လဂ်နှင့် အတူ ရပ်တည်ပြီး- မိန်လဂ် သမား အတွက် ၉-တန့် အိမ်ရှင် ဖြစ်သော အင်္ဂါသည်လည်း- ၄င်းပိုင် ဗြိစ္ဆာရာသီတွင် တည်သည် ဆိုပါအံ့- ထိုဇာတာရှင်သည်- မြင့်မြတ် ကြီးပွား ကံကောင်းစေသော၊ ဥာဏ်ပညာ ကြီးစွာဖြင့် ဦးဆောင်စွမ်း ရှိစေသော လက္ချမီး ယောဂ ကို ရပြီ ဖြစ်၏။ လက္ချမီး ယောဂ သည်လည်း ရာဇ ယောဂ တစ်မျိုးတွင် ပါဝင်၏။ (မှတ်ချက်- လက္ချမီး ယောဂ အခြား အနေအထားလည်း ရှိသော်လည်း - လွန်စွာ ရှုပ်ထွေး သွားမည် စိုး၍ ဤဆောင်းပါးတွင် မဖေါ်ပြတော့ပါ။)
ဤအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော အခြား ရာဇ ယောဂ ပုံစံ တစ်မျိုးမှာကား- အဓိ ယောဂ ခေါ် အဓိယ ယုဂ် ဖြစ်၏။ ပရာသျှရ ဆရာက - ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာ တို့သည် သောမဂြိုဟ်များ ဖြစ်လျှက်- စန်းခေါ် တနင်္လာမှ နေ၍ ရေတွက်သော်- ၆-တန့်၊ ၇-တန့်၊ ၈-တန့် အတွင်းတွင် တည်နေလျှင်- ဇာတာရှင်သည် မင်းအစိုးရ၊ စစ်သေနာပတိ တို့ ဖြစ်လိမ့်မည် ဟု ဆိုခဲ့၏။ သာရ၀လိ ကျမ်းတွင်လည်း- အဓိ ယောဂ ကိုပင် ရာဇ ယောဂ ဟု သတ်မှတ်ခဲ့၏။
လဂ်သခင် သည် အင်အားကောင်းပြီး၊ အခြားသော ဂြိုဟ်များမှာလည်း ဥုစ်၊ကသစ်၊ ကိန်း၊ တြိဂေါဏ အိမ်တို.တွင် ရပ်တည်ခြင်း ဖြင့် ရတတ်သော- မရိဒိင်္ဂ ယောဂ သည်လည်း မင်းကဲ့သို့ ဖြစ်စေတတ်သော ရာဇ ယောဂ တစ်မျိုးပင် ဖြစ်၏။
ဤသို့သော တည်နေရာကြောင့် ဖြစ်ရသော ရာဇ ယောဂ ၀င် ယောဂ တို့တွင် - စနေသည် တူရာသီတွင် တည်လျှက်- လဂ်မှ ကိန်းအိမ် တွင် တည်နေပါက- ရလာတတ်သော ပဉ္စမဟာ ပုရိဿ ယောဂ တစ်ခု ဖြစ်သော သဿ ယောဂ သည်လည်း ပါဝင်၏။ ဤယောဂ ကို ရထားသော သူတို့ အနေဖြင့်- အောင်မြင် ကြီးပွားခြင်း၊ အဆင့်အတန်း မြင့်မားခြင်း၊ နာမည် ကျော်ကြားကာ- အများကို အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်း ကို ရထားသည် ဆို၏။
ဂြိုဟ်တို့ အချင်းချင်း အပူးအမြင် လွှမ်းမိုးမှု တို့ကြောင့်- ဖြစ်ပေါ် ရရှိသော ရာဇ ယောဂ များ အနေဖြင့်မူ- ၇-တန့်သခင်သည် ဥုစ်ရလျှက်၊ ၁၀-တန့်တွင် ရပ်တည်ကာ ၉-တန့်၊ ၁၀-တန့် သခင်တို.နှင့်ပါ ပူးနေပါက ရတတ်သော- သီရိနာသ ယောဂ ပိုင်ရှင် အနေဖြင့်- နတ်ဘုရား၏ ဘုရင် ဖြစ်မည် ဟုပင် ဆိုထား၏။
ထို့အပြင်လည်း- ကြာသပတေးသည် တနင်္လာမှ ကိန်းအိမ် (၁၊၄၊၇၊၁၀ တန့်တွင်) ရပ်ခြင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း- ကြာသပတေး သည် တနင်္လာနှင့် ပူးနေခြင်းကြောင့်သော် လည်းကောင်း ရတတ်သည့် ဂဇ ကေသရီ ယောဂ- သည်လည်း ရာဇ ယောဂ တစ်မျိုးပင် ဖြစ်၏။
ဆက်လက်၍ ကိန်းအိမ် ရှင် နှင့် တြိကုန်း အိမ်ရှင်များ အိမ်ဖလှယ်နေခြင်း၊ ဆက်စပ် နေခြင်း ကြောင့် ဖြစ်လာသော ရာဇ ယောဂ အမျိုးအစားများ ရှိသကဲ့သို့-
ပဉ္စမဟာ ပုရိသ ယောဂများ၊
၀ိပရိတ္တ ရာဇ ယောဂများ၊
နိစ္စ ဘင်္ဂ ရာဇ ယောဂများ တို့လည်း ရှိသေး၏။
ဤနေရာတွင်- မိုးတား နည်းစနစ် အရ- ဒုဌာန အိမ်ရှင်များ ၊ ဒုဌာန တွင် နေလျှင် ကောင်းသည် ဆိုသော ၀ိပရိတ္တ ရာဇ ယောဂများ ကို လက်ခံ အသုံးပြုခြင်း မရှိပဲ- ဒုဌာန အိမ်ရှင် အနေဖြင့်- ဒုဌာန ဖြစ်သော်လည်း မိမိပိုင် ရာသီတွင် တည်မှသာ ကောင်းသည် ဟု လက်ခံ ကျင့်သုံးပါသည်။
နိစ္စ ဘင်္ဂ ရာဇ ယောဂ ခေါ် နိစ် ဖြစ်ခြင်းမှ ပေါ်လာသော ရာဇ ယောဂ များကို လေ့လာရာတွင်-
ဂြိုဟ်တို့ အနေဖြင့် နိစ်မိခြင်းသည် အင်အား နည်းစေသော အနေအထား တစ်ရပ်တွင် ရှိသော်လည်း- ထိုသို့ နိစ် ဖြစ်နေရာမှ တစ်ဆင့်- အင်အားကောင်းလာ နိုင်ပြီး ရာဇ ယောဂ အဆင့်သို့ ဖြစ်သွားစေနိုင်သော နိစ္စ ဘင်္ဂ ရာဇ ယောဂ များ အကြောင်းကိုလည်း ရှေးကျမ်းများတွင် ရေးသား ညွန်ပြခဲ့ကြပါသည်။ အလွတ်ကျက်မှတ် ခြင်း မဟုတ်ပဲ- ၄င်းတို့၏ ဆိုလိုရင်းကို လေ့လာရန် သင့်သော ယောဂများ ဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင် စဉ်းစား ရမည့် အချက်မှာ နိစ်ပျက်တိုင်း- ရာဇ ဖြစ်သွားနိုင်ပါမည်လား။ အင်အားနည်း စေသော အကြောင်း ပျက်ခြင်းသည်- အင်အားများစေသော အကြောင်း ကို ဖြစ်စေခြင်း နှင့် ပတ်သက် ပါသည်လား၊ အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသော နိစ္စဘင်္ဂ ယောဂ များတွင် မည်သည် တို့သည်- နိစ်ပျက် ရုံမျှ မက- ရာဇ ယောဂ အဆင့်သို့ တက်လှမ်းသွား နိုင်သော ယောဂများ ဖြစ်နိုင်သနည်း၊ မည်သည်တို့သည် နိစ်ပျက်ရုံ သက်သက် မျှသာ ဖြစ် နိုင်မည်နည်း တို့ကို ဆက်လက် ဆင်ခြင် သွားစေလိုသည်။
ဥပမာ- လူတစ်ဦး အနေဖြင့်- နေမကောင်းဖြစ်၍- ဆေးရုံတက် နေရာမှ- ဆေးရုံ ဆက်တက် စရာမလို တော့ပဲ- ဆင်းခွင့်ရခြင်းကို လွန်စွာ ကျန်းမာရေး ကောင်းသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါမည်လား။ အသားမမည်း ဘူးဟု ဆိုခြင်းသည် အသားဖြူသည်ဟု ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ကြောင်း တို့ကို နားလည် ရပါမည်။
သို့သော်- အချို့သော အခြေ အနေများတွင်မူ- ကြားဟူ၍ ရှိမနေတတ်ပဲ- မကောင်းသော ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ခွင့် မကြုံသည့် နှင့်ပင် အလိုလို ကောင်းသော ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ခွင့် ကြုံသွားသော အနေအထား များလည်း ဖြစ်သွားပါ၏။
ဂျင်ဂစ်ခန်၏ ဇာတာတွင် ။
ဂဇ ကေသရီယောဂ (၁)
ကြာသပတေးသည် တနင်္လာမှ ကိန်းအိမ် (၁၊၄၊၇၊၁၀ တန့်တွင်) ရပ်ခြင်းဖြင့်ဤ ယောဂ ကိုရရှိသည်။
ကြာသပတေးသည် တနင်္လာမှ ကိန်းအိမ် (၁၊၄၊၇၊၁၀ တန့်တွင်) ရပ်ခြင်းဖြင့်ဤ ယောဂ ကိုရရှိသည်။ ဂဇ ဆိုသည်မှာ ဆင်ကို ဆိုလို၍ ကေသရီသည် ခြင်္သေ့ကို ဆိုလိုသည်။ ဆင်နှင့် ခြင်္သေ့တို.သည် တောတောင် အလယ်တွင် လွန်စွာထင်ရှား၍ အခြားသော တိရစ္ဆာန်များ၏ ကြောက်ရွံ.လေးစားခြင်းကို ရရှိသကဲ့သို. ၄င်းတို.သည် လူအများကို သင်ကြားပေးနိုင်ခြင်း၊ အကြံပေးတတ်ခြင်း၊ သြဇာ အာဏာကြီးမားခြင်း တို.တွင် ထင်ရှားသည်။ သေဆုံး ပြီးနောက် အချိန်ကြာမြင့်သော ကာလ အထိ ၄င်းတို.၏ အမည်မှာ ကြာရှည်စွာတည်တံ့သည်။ မှတ်ချက်၊ ဂဇကေသရီ ယုဂ်ကို တွေ့ရှိပါက ၄င်းကို ဖျက်ဆီးတတ်သော ကမ္မဓရုမယုဂ် (Kemadruma Yoga) ၊ (တနင်္လာ၏ ဘေးဘယ်ညာ နှစ်ဘက်စလုံး တွင် တနင်္ဂနွေမှ လွဲ၍ မည်သည့်ဂြိုဟ်မှ မရှိသောယုဂ်) ပါမပါ ကြည့်ရန်လိုပါသည်။ အကယ်၍ ကမ္မဓရုမ ယုဂ် ကို တွေ့ခဲ့ပါလျှင် လည်း ၄င်း၏ အဆိုးကို ပျက်ပြယ်၍ ကောင်းခြင်းကို ပြန်လည် ဖြစ်စေ တတ်သော ကာလပဓရုမယုဂ်၊ (Kalpadruma Yoga) (လဂ်မှ ကိန်းအိမ်တို.တွင် ဂြိုဟ်ရပ်တည်ခြင်း ယောဂ) ပါမပါ ကြည့်ရန်လိုပါသည်။
ဂဇ ကေသရီယောဂ (၂)
ကြာသပတေးသည် တနင်္လာနှင့် ပူးနေပါက ဤယောဂကို ရသည်။
ကြာသပတေးသည် တနင်္လာမှ ကိန်းအိမ် (၁၊၄၊၇၊၁၀ တန့်တွင်) ရပ်ခြင်းဖြင့်ဤ အမျိုးအစား ဂဇ ကေသီရီ ယောဂ ကိုရရှိသည်။ သူတစ်ပါး တို့အား လွှမ်းမိုး နိုင်စွမ်း ကြီးမားသည်။ ကိုယ်ကျင့် တရားကောင်းမည်။ အမည် ကျော်ကြားမည်။ ကြွယ်ဝမည်။ ပူးတည်သော ဘာဝ အနေအထား အလိုက် အကျိုးပေးမှု အပြောင်းအလဲ ရှိသည်။
နိစ္စဘင်္ဂ ရာဇယောဂ- (၁)
နိစ်မိနေသော ဂြိုဟ်၏ ဥုစ်ရာသီ အိမ်ရှင် သည် တနင်္လာဂြိုဟ်မှ ကိန်းအိမ် (၁၊၄၊၇၊၁၀တန့်) တွင် ရပ်တည် ခြင်းဖြင့် ဤယုဂ်ကို ရရှိသည်။
ဤဇာတာတွင် သောကြာသည် နိစ်ရာသီတွင် တည်၏။ တနည်းအားဖြင့်- နိစ် ဆိုသော အင်အားနည်းသော အနေအထားရောက်သွား သော်လည်း- သောကြာ-ဥုစ်ရသော ရာသီဖြစ်သော မိန်ရာသီ၏ အိမ်ရှင် ကြာသပတေးသည် တနင်္ဂလာနှင့် အတူတူတည်နေခြင်း၊ တနည်းအားဖြင့် တနင်္ဂမှ ရေတွက်သော်- ၁-တန့်တွင် တည်အားဖြင့်- နိစ္စဘင်္ဂ ရာဇ ယောဂ အဖြစ်သို့ ရောက်သွားသည်။
နိစ်မိနေသော ဂြိုဟ်သွားရောက် ရပ်တည်နေသော ရာသီ၏ အိမ်ရှင်သည် ၄င်းပိုင်အိမ်တွင် နိစ် ဖြစ်သည့် နိစ်သခင် ဂြိုဟ်နှင့် ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း၊ ဆက်စပ်ထားခြင်းဖြင့် ဤယုဂ်ကို ရရှိသည်။ ထို.ကြောင့် နိစ် ဖြစ်သော သဘော ပျက်ပြယ်ကာ ရာဇယုဂ် ဖြစ်သော အဆင့်သို.ရောက်ရှိသွားသည်။
ဤဇာတာတွင်- နိစ်မိသော သောကြာဂြိုဟ်သည်- ဗုဒ္ဓဟူးပိုင် ကန်ရာသီတွင် တည်၍- နိစ်ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်၏။ ကန်ရာသီ ပိုင်ရှင် -ဗုဒ္ဓဟူးသည် ကန်ရာသီ ၂၈း၃၃ အံသာ၊ နိစ်မိသော သောကြာသည် ကန်ရာသီ ၁၉း၅၆ အံသာတွင် တည်၍- ရာသီချင်း အတူတူ ဖြစ်နေသောကြောင့်လည်း- ဤယောဂ ကို ပြန် ရရှိသည်။ (မှတ်ချက်- မိုးတား စနစ်တွင်မူ- ၅-ဒီဂရီ အတွင်း ကျရောက်မှ သာ ပူးသည်၊ မြင်သည် သတ်မှတ်သော်လည်း- ရှေးကျမ်း လာ ယောဂ များကို လေ့လာရာတွင်- သမားရိုးကျ ထုံးစံ အတိုင်းသာ သုံးသပ်သည်။)
နိစ်မိနေသော ဂြိုဟ်အား၊ ၄င်း၏ မူလအိမ်တွင် ဥုစ်ရမည့် ဂြိုဟ် မှ ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း၊ ဆက်စပ်ထား ခြင်းဖြင့် ဤယုဂ်ကို ရရှိသည်။
သောကြာ-ဥုစ်ရသော ရာသီဖြစ်သော မိန်ရာသီ၏ အိမ်ရှင် ကြာသပတေးသည် နိစ်မိထားသော သောကြာ နှင့် အတူတကွ တည်နေခြင်း၊ နိစ္စဘင်္ဂ ရာဇ ယောဂ နောက်တစ်မျိုးကို ထပ်မံ ရရှိပြန်သည်။
၄-တန့် အိမ်ရှင်၊ ၅-တန့်အိမ်ရှင်၊ ၇-တန့်အိမ်ရှင်၊ ၉-တန့်အိမ်ရှင်၊ ၁၀-တန့်အိမ်ရှင် တို.အနက်မှ တစ်ခုခုသည် လဂ်သခင်အား ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှု ပြုခြင်း၊ တစ်ဖန် လဂ်သခင်မှ လည်း ၄င်းအား အပြန်အလှန်အားဖြင့် ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း ရှိနေပါက ဤယုဂ် ကို ရရှိသည်။
၄-တန့် အိမ်ရှင် သည် ၅-တန့်အိမ်ရှင်၊ ၉-တန့်အိမ်ရှင်၊ တို.အနက်မှ တစ်ခုခုကို ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှု ပြုခြင်း၊ တစ်ဖန် ၄င်းတို. မှ လည်း ၄-တန့် အိမ်ရှင် အား အပြန်အလှန်အားဖြင့် ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း ရှိနေပါက ဤယုဂ် ကို ရရှိသည်။
၅-တန့် အိမ်ရှင် သည် ၇-တန့်အိမ်ရှင်၊ ၁၀-တန့်အိမ်ရှင်၊ တို.အနက်မှ တစ်ခုခုကို ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှု ပြုခြင်း၊ တစ်ဖန် ၄င်းတို. မှ လည်း ၅-တန့် အိမ်ရှင် အား အပြန်အလှန်အားဖြင့် ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း ရှိနေပါက ဤယုဂ် ကို ရရှိသည်။
ရှေးကျမ်း အဆိုအရ- အိမ်ရှေ.မင်းသား ကဲ့သို.သော တော်ဝင် နန်းနွယ် အဖြစ်ကို ရမည်ဟု ဆိုထားသည်။
၇-တန့် သခင်နှင့် ၉-တန့်သခင် တို. အပြန်အလှန် မြင်နေကြပါက ဤယောဂ ကိုရသည်။
၉-တန့် သခင်နှင့် ၁၀-တန့်သခင် တို. အပြန်အလှန် မြင်နေကြပါက ဤယောဂ ကိုရသည်။
၅-တန့် သခင်နှင့် ၉-တန့်သခင် တို. ပူးနေခြင်း၊ အပြန်အလှန် မြင်နေခြင်း ရှိကြပါက ဤယောဂ ကိုရသည်။ (ဗြို.ဟဇ် ပရသျှရ ဟောရ သျှတ္တရ ကျမ်း၊ ၄၁၊၃၃-၃၄)
၄-တန့်သို့မဟုတ် ၁၀-တန့် အိမ်ရှင် နှင့် ၅-တန့်၊ ၉-တန့်အိမ်ရှင်၊ တို. ပူးကပ်စွာ ရှိနေပါက ဤယုဂ် ကို ရရှိသည်ဟု ဗြို.ဟစ်ဇာတက ပရာသရ ဟောရသျှတ္တရ ကျမ်းတွင် ပြဆိုထားပြန်သည်။ (ဗြို.ဟဇ် ပရသျှရ ဟောရ သျှတ္တရ ကျမ်း၊ ၄၁၊၃၇)
သောကြာဂြိုဟ်သည် ကာရက အံသာ လဂ္ဂဏတွင် တည်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ၄င်းမှ ၅-တန့်တွင် တည်နေခြင်း၊ ဖြစ်ကာ ၄င်းအား တနင်္လာ (သို့မဟုတ်) ကြာသပတေး ၏ အမြင်၊ ဖြစ်စေ ဆက်သွယ် မှု ဖြစ်စေကို ရနေပါက ဤယောဂကို ရသည်။ (ဗြို.ဟဇ် ပရသျှရ ဟောရ သျှတ္တရ ကျမ်း၊ ၄၁၊၁၁)
ဤဇာတာရှင်သည် မြင့်မြတ်သော - တော်ဝင်မျိုးနွယ်တို့နှင့် သွေးသား ဆက်စပ် တတ်လျှက် - တော်ဝင် အသိအမှတ် ပြုခြင်း ခံရသူ ဖြစ်တတ်သည် ဟု ဆိုထားသည်။
ဤရာဇ ယောဂ သည်ကား- ဇေမဏိ ဆရာရသေ့ မူနှင့် ပရသျှရ ဆရာ၏ မူတို့ ဆက်စပ်နေသော ယောဂ ဖြစ်သည်။ ဤဇာတာတွင် အံသာ အမြင့်ဆုံး ဂြိုဟ် - တနည်းအားဖြင့် အတ္တမာ ကာရက ဂြိုဟ်မှာ ဗုဒ္ဓဟူး ဖြစ်ပြီး- အတ္တမာကရာက- ဂြိုဟ် အနေဖြင့် န၀င်း စက်တွင် တည်သော ရာသီ သခင်အား- ကာရက အံသာ လဂ္ဂဏ ဟူ၍ ခေါ်သည်။ ယခု အခါ အတ္တမာ ကာရကဂြိုဟ် ဗုဒ္ဓဟူးသည်- န၀င်းစက်တွင်လည်း- ကန်ရာသီ တွင် ပင် တည်ခြင်း။ (ဤသို့ ရာသီ နှင့် န၀င်း တို့တွင် တူစွာ တည်ခြင်းကို များစွာသော နက္ခတ် ဗေဒင် ပညာရှင်များက ၀ဂ္ဂတ္တမ န၀င်း ဟု သတ်မှတ် ကြလေ့ ရှိသည်။) ထိုကန်ရာသီ သည်- ဗုဒ္ဓဟူးပိုင်ရာ ဖြစ်နေပြန် ၍- ဤဇာတာ၏ ကာရက အံသာ လဂ္ဂဏ မှာ လည်း- ဗုဒ္ဓဟူးပင် ပြန်ဖြစ်နေပြန်သည်။ သောကြာသည်- ကာရအံသာ လဂ္ဂဏ ခေါ် ဗုဒ္ဓဟူးနှင့် အတူတည်နေခြင်း ကြောင့်- အထက်တွင် ဖေါ်ပြထားသော ရာဇ ယောဂ ကို ရပြန်၏။ နောက်ဆက်တွဲ အနေဖြင့်- ကြာသပတေး နှင့်လည်း အံသာ အလွန်ပူးကပ်စွာ တည်ခြင်းကြောင့်- ဤရာဇ ယောဂ ကို တင်းပြည့် ကျပ်ပြည့် ရလိုက်ပြန်တော့၏။
ဂျင်ဂစ်ခန်၏ အဘိုး..သည် တစ်ချိန်က- မွန်ဂို ပြည်နယ်တွင် အရေးပါခဲ့သော နန်းမျိုး အနွယ်ဖြစ်သော်လည်း- ဖခင် လက်ထက်တွင်မူ- သာမာန် လူမျိုးစု ခေါင်းဆောင် အဆင့်မျှသာ ရှိခဲသည်။
ဂြိုဟ်တစ်လုံးသည် နိစ်မိနေသော်လည်း၊ ရောင်ခြည်အား ကောင်းနေခြင်း၊ သို့မဟုတ် နောက်ပြန် သွားနေခြင်း၊ ကောင်းသော ရပ်တည်မှု ရှိပါက ဤယောဂကို ရသည်။ (ဖလဒီပက ၇၊၃)
ဤဇာတာရှင်သည် အုပ်ချုပ်သူမင်း ကဲ့သို့ အဆင့်အတန်း၊ မြင့်မား၍ တော်ဝင် အနေအထား ရှိမည်ဟု ဆိုထားပါသည်။
သောကြာဂြိုဟ်သည် နိစ်မိထားလျှက်- နေ၏ လွှမ်းမိုးမှု မိထားသော အနေထား တွင်ရှိခြင်း၊ နောက်ပြန် သွားခြင်း မရှိသော်လည်း- ကောင်းသော ရပ်တည်မှု ဖြစ်သည့်- ၄-တန့် ၊ မိတ်ရာသီတွင် တည်ထားခြင်း။ မိတ်န၀င်းတွင် တည်ထားခြင်း ကြောင့်- ဤရာဇ ယုဂ်ကိုမူ အင်အားနည်းစွာဖြင့် ရထားသည် ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ကျမ်း၏ အဆိုအရ နိစ်မိသော ဂြိုဟ်ရပ်တည်ရာ ရာသီ၏ အိမ်ရှင် ဂြိုဟ် ဖြစ်စေ- နိစ်ဂြိုဟ် တည်ရာ- ရာသီတွင် ဥုစ် ဖြစ်မည့် ဂြို ဖြစ်စေ- တစ်ခုခု သည် စန်းခေါ် တနင်္လာဂြိုဟ်မှ ဖြစ်စေ၊ လဂ်မှ ဖြစ်စေ ကိန်းအိမ် ဖြစ်သော (၁၊၄၊၇၊ ၁၀) အတန့်များတွင် ကျရောက်ပါက ရာဇယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၉၊၁၃)
ဤဇာတာရှင်သည် ရှင်ဘုရင် သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို. အုပ်ချုပ်ရသော သူ ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤဇာတာတွင်- နိစ်မိသော သောကြာဂြိုဟ် ရပ်တည်သော ရာသီ အိမ်ရှင် သည် ဗုဒ္ဓဟူး ဖြစ်၍- ၄င်းသည်- စန်းမှ နေ၍- ၁-တန့် (စန်း နှင့် ရာသီတူစွာ ရှိနေခြင်း) ကြောင့်- ဤဇာတာ အနေဖြင့်- အထက်ပါ ရာဇ ယောဂ ကို ထပ်မံ ရရှိပြန်လေသည်။
သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ကျမ်း၏ အဆိုအရ စန်းခေါ် တနင်္လာဂြိုဟ် ရပ်တည်သော န၀င်းရာသီပိုင် အိမ်ရှင်ဂြိုဟ်သည် လဂ်မှ ဖြစ်စေ၊ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်မှ ဖြစ်စေ ကိန်းအိမ် ဖြစ်သော (၁၊၄၊၇၊ ၁၀) အတန့်များတွင် ဖြစ်စေ၊ များတွင် ဖြစ်စေ၊ တြိကုန်း အိမ်များဖြစ်သော (၁၊၅၊၉) အတန့်များတွင် ဖြစ်စေ ကျရောက်ပါက ရာဇယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၉၊၂၈)
ဤဇာတာတွင်- စန်းခေါ် တနင်္လာသည် သောကြာပိုင် ပြိဿ န၀င်းတွင် တည်၏။ ထိုသောကြာ သည်- ဗုဒ္ဓဟူး နှင့် အတူတကွ တည်ခြင်း (ဗုဒ္ဓဟူးမှ ၁-တန့်) ကြောင့်- ဤအမျိုးအစား ရာဇ ယောဂကို ရပြန်ပါသည်။
ဇေမဏိရာဇ ယောဂ (၁၂)
ကမ္ဘာကျော် ဝေဒပညာရှင် ကေ-အင်န်- ရောင်အို ၏ အဆိုအရ စန်းခေါ် တနင်္လာဂြိုဟ် နှင့် သောကြာတို.သည် အတူတကွပူးယှဉ်နေခြင်း၊ သို့မဟုတ် တနင်္လာအား သောကြာမှ မြင်ထားခြင်း ရှိပါက ဤရာဇယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။
အခြား ယောဂ များ နှင့် ဂျင်ဂစ်ခန်
အသျှရာယ နာဠ ယောဂ
ဂြိုဟ် ၇ လုံးတို.သည် ဒွိဘာဝ ရာသီတွင် တည်နေကြလျှင်- အသျှရာယ နာဠ ယောဂကိုရရှိသည်။
အသျှရာယ နာဠ ယောဂ ကိုရထားသူသည် ခြေလက် တို. ပုံမှန် မရှိတတ်၊ လွန်စွာ ပါးနပ် လိမ္မာသည်။ ငွေကြေး အနေအထား၊ ဘ၀ အနေအထား အတက်အကျ ရှိတတ်သည်။ ကြည့်ကောင်း သော ရုပ်ရည် ရှိသည်။ သူ၏ နီးစပ်သော ဆွေမျိုးညာတိ တို.ကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်သည်။
အက္ကရိတိ ၀တိ ယောဂ
ဂြိုဟ်အားလုံးတို့သည် ကိန်းအိမ် (၄) ခု မှ အပ အခြားသော အိမ်များ တွင် သာရပ်တည်ကြသည်။
ဇာတာရှင်သည် တစ်ဆင့်ခြင်း ကြွယ်ဝ ချမ်းသာစေရန် ပြုလုပ်မည်။ မကြီးကျယ်သော်လည်း တာရှည်ခံသော စည်းစိမ် ရမည်။ အသက်ရှည်မည်။ အပြောအဆို ချိုသာ၍ မိမိ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုတို့ကို သိုသိပ်စွာ ထားလိမ့်မည်။
အက္ကရိတိ ၀ါပိ ယောဂ (အပ္ပေါ ကလိမ) ယောဂ
ဂြိုဟ်တို့သည် ဘာဝ တစ်ခုတည်း တွင် သာ ရပ်တည်ကြသည်။
ဇာတာရှင်သည် ဆင်းရဲခြင်း၊ ပညာမတတ်ခြင်း၊ ကောက်ကျစ်ခြင်း၊ ဒုက္ခ ဆင်းရဲကြီးစွာရောက်ခြင်း၊ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ လှည့်သွားလာနေရခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်ဟု ဆိုထားသည်။
သောမဂြိုဟ်များ ဖြစ်ကြသော (ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာ၊ ကြာသပတေး) တို.သည် လဂ်မှ နေ၍ ဥပစာရ အိမ်များ ဖြစ်သော (၃၊၆၊၁၀၊၁၁) တို.တွင် ရပ်တည်ပါက-ဤယောဂကို ရသည်။
ဇာတာရှင် သည် အလွန်အမင်း ကြွယ်ဝချမ်းသာ နိုင်ပြီး၊ မိမိအိမ်တွင် နေလျှက်နှင့် ပင် သက်တောင့် သက်သာ ချမ်းသာကို ရလိမ့်မည် ဟု ပြဆိုထားသည်။
၀င်္ကန္တ စောရ ဘိသိ ယောဂ
လဂ်သခင် သည် ရာဟု၊စနေ သို့မဟုတ် ကိတ်တို.နှင့် ပူးယှဉ်နေပါက ဤယောဂကို ရသည်။ (သာဝတ္ထ စိဏ္တာမဏိ ၂၊၇၆)
ဤဇာတာရှင်သည် မိမိအနီးပါတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူများက မိမိအား ကောက်ကျစ်ခြင်း၊ ခိုးယူ လှည့်ဖျားခြင်းတို့ကို အမြဲတစ်စေ သံသယ ဖြစ်နေရတတ်သော အနေအထားတွင် ရှိသည်ဟု ဆိုထားသည်။
၉-တန့်သခင် သည် ၅-တန့်သခင် နှင့် ပူးနေပါက ဤယောဂကို ရသည်။ (ဗြို.ဟဇ် ဇာတက ပရာသျှရ ဟောရ သျှတ္တရ ၄၃၊၁၄)
ဇာတာရှင် ထိုဂြိုဟ်တို. ပိုင်သော ဒဿာ ကာလ တို.တွင် ကြွယ်ဝ ချမ်းသာခြင်းအကျိုးကို ခံစားရမည်။
ဤဇာတာတွင် ၉-တန့် အိမ်ရှင်မှာ- ကြာသပတေး ဖြစ်သည်။ (မိုးတား စနစ် အနေဖြင့် အိမ်ရှင် နှင့် သခင်ကို ခွဲခြား သုံးသပ်ပါသည်။) ထိုနည်းတူ ၅-တန့် အိမ်ရှင်မှာ အင်္ဂါ ဖြစ်ပါသည်။ (မိုးတား စနစ်အရ- ၄င်းကိုလည်း ၅-တန့် သခင်ဟု မခေါ်တွင်ပါ၊ အိမ်ရှင် ဟုသာ သတ်မှတ်ပါသည်။) မည်သို့ပင် ဆိုစေ- ၉-တန့် အိမ်ရှင် ကြာသပတေး နှင့် ၅-တန့် အိမ်ရှင် အင်္ဂါ တို့ ရာသီ တစ်ခုတွင် ပူးတည် နေ၍လည်း- ဇာတာရှင် အနေဖြင့်- အထက်ပါ ဓန ယောဂ ကို ရထားပါသည်။)
လဂ်သခင်သည် ၂-တန့်၊ ၅-တန့်၊ ၉-တန့်၊ ၁၁-တန့် အိမ်ရှင်များနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု ရှိပါက ချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။
လဂ်သခင် တနင်္လာသည်- ၂-တန့် သခင် တနင်္ဂနွေ၊ ၅-တန့် အိမ်ရှင် အင်္ဂါ၊ ၉-တန့် အိမ်ရှင် ကြာသပတေး၊ ၁၁-တန့် အိမ်ရှင် သောကြာ တို့ နှင့် အတူတကွ တည်နေခြင်းဖြင့်- ဤဓန ယောဂ ကိုလည်း ရလိုက်ပြန်ပါသည်။
၂-တန့် သခင်သည် ၅-တန့်၊ ၉-တန့် နှင့် ၁၁-တန့် အိမ်ရှင်များနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု ရှိပါက ချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။
၅-တန့် သခင်သည် ၉-တန့် နှင့် ၁၁-တန့် အိမ်ရှင်များနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု ရှိပါက ချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။
၉-တန့် သခင်သည် နှင့် ၁၁-တန့် အိမ်ရှင် တို. အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု ရှိပါက ချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။
သာဝ ၀ိရီယ ဓနယောဂ
အင်္ဂါသည် လဂ်မှ ဖြစ်စေ၊ စန်းမှ ဖြစ်စေ၊ တနင်္ဂနွေမှ ဖြစ်စေ ၁၀-တန့်၏ အိမ်ရှင် ဖြစ်နေသော် ဤယောဂကို ရသည်။ (ဗြို.ဟဇ်ဇာတက)
ဇာတာရှင် လုပ်ကိုင်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဇာတာရှင် ၏ ဘ၀ အဆင့်အတန်း သည် သဘာဝ တွင်းထွက် စသည်များ၊ မီး သို့မဟုတ် အပူ နှင့် သက်ဆိုင်သော စက်အင်ဂျင်၊ လက်နက်၊ စသည်တို.နှင့် ဆက်စပ်နေတတ်ခြင်း၊ သိုမဟုတ် ဇာတာရှင် အနေဖြင့် အင်အားသုံးရသော လုပ်ငန်းများ၊ ရန်သူနှင့် ဆက်ဆံရသော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင် ရတတ်သည် ဟု ဆိုထားသည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် လဂ်မှ ဖြစ်စေ၊ တနင်္လာခေါ် စန်းမှ ဖြစ်စေ၊ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မှ ဖြစ်စေ၊ ၁၀-တန့်မြောက် ရာသီ၏ အိမ်ရှင်ကို ပူးခြင်း။ မြင်ခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော် ဤယောဂကို ရရှိသည် ဟု ဗြို.ဟဇ်ဇာတက ကျမ်းမှ ဆိုထားပါသည်။
ဤယုဂ်ကိုရပါက အင်္ဂါနှင့်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ၊ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ၊ မီး၊ မီးဖိုချောင်၊ စက်ကရိယာတို.နှင့် ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လက်နက် ခဲယမ်းမီးကျောက်တို.နှင့် ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ၊ စွန်.စားရသော လုပ်ငန်းများ၊ ခန္ဓာကို စွမ်းအင်ကို အသုံးချရသော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ရမည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ ဤယောဂ ကို လေ့လာရရာတွင်လည်း အင်္ဂါ၏ မူလသဘာဝ ဖြစ်သော၊ ရန်မက်ဖြစ်ပွားခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ သိုင်းပညာ၊ ကိုယ်ခံပညာ နှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခြင်းတို.ကို လုပ်ကိုင်ရမည်ကို ကောက်ချက်ချသင့်ပါသည်။ တစ်နည်း အားဖြင့် အင်္ဂါသည်- တီထွင် ထိုးဖေါက် ခြင်း၊ ရင်ဆိုင် ယှဉ်ပြိုင်ရခြင် တို.ကို ဖော်ဆောင်သော ဂြိုဟ်လည်း ဖြစ်သည်။
၃-တန့်သခင်သည် ကောင်းသော န၀င်း ရာသီတွင်၊ သောမဂြိုဟ်တို.၏ အပူးအမြင်ကို ရထားကာ အင်္ဂါသည် လည်း ကောင်းသော ရာသီတွင် ရပ်တည်ပါက ဤယောဂကို ရသည်။
၀ိစိတြ သောဓျ ပရကာရ ယောဂ
၄-တန့်သခင်နှင့် ၁၀-တန့်သခင် တို.သည် စနေ၊ အင်္ဂါတို.နှင့် အတူတကွ ပူးယှဉ်သော် ဤယောဂကို ရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၄၊၅၅)
ဇာတာရှင်သည်- နန်းတော်ကဲ့သို့ ကြီးကျယ်သော အိမ်များစွာ၏ အရှင်သခင် ဖြစ်မည် ဟု ဆိုထားသည်။
ဗန္ဓု ပူဇ ယောဂ
သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ကျမ်းအရ ၄-တန့်သို့မဟုတ် ၄-တန့် ဘာဝ သခင် တို.သည် ကြာသပတေး ဂြိုဟ်နှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိပါက ဤယုဂ်ကို ရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၄၊၆၅)
ဇာတာရှင်သည် မိသားစုဝင်များနှင့် မိတ်ဆွေများကို လေးစား တန်ဘိုးထား လိမ့်မည် ဟုဆိုသည်။
ဗာဟု ထရိ ယောဂ
လဂ်သခင်နှင့် ၇-တန့်သခင်တို.သည် ပူးနေလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု အပြန်အလှန် မြင်နေကြလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ဤယုဂ်ကို ရသည်။
ဇာတာရှင်တွင် အိမ်ထောင်ဆက်များလိမ့်မည် ဟုဆိုသည်။
စတုချ ချက္ကရ ယောဂ
မည်သည့် ဂြိုဟ်ကမျှ စရ ရာသီများတွင် ရပ်တည်ထားခြင်း မရှိပါက ဤယောဂကို ရသည်။ (သမ္ဗု ဟောရ ပရကသျှ ကျမ်း)
ဤယောဂကို ရခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် ဘုန်းတန်ခိုး အင်အား ကြီးမားခြင်း၊ ပညာမျိုးစုံ တတ်မြောက်ခြင်း၊ အသက်ရှည်ခြင်း နှင့် အစွမ်းပြနိုင်ခြင်းများ ရှိမည် ဟု ဆိုထားသည်။
(ဂြိုဟ်ပူးယောဂများ - အလွန်များပြားသောကြောင့်- နောက်ဆောင်းပါးတွင် ဆက်လက် ဖတ်ရှုကြပါရန်။)